Okwu ego: London Heathrow chọrọ ọgwụ mgbochi Ndị njem ka ha gaa njem ọzọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Okwu ego: London Heathrow chọrọ ọgwụ mgbochi Ndị njem ka ha gaa njem ọzọ
Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
FRAPORT na -arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt, Amsterdam Schiphol na -eji nwayọ na -ejide, mana London Heathrow ka na -agbada. Njikwa Heathrow na -achọ imeghe ntụrụndụ na njem azụmahịa na UK maka ndị njem ọgwụ mgbochi.
Ọdụ ụgbọ elu London Heathrow chọrọ ka ndị njem ọgwụ mgbochi gbapụ ọzọ n'ọdụ ụgbọ elu London a
Ego Heathrow ka na -agbanwe agbanwe, n'agbanyeghị mfu na -abawanye -Mkpokọta mfu sitere na COVID-19 arịala ruo £ 2.9bn.
London Heathrow etinye ego na teknụzụ nchekwa echekwara COVID-19 kachasị ọhụrụ iji nweta ọkwa Skytrax 4*, nke ọdụ ụgbọ elu UK kacha nweta.
Ndị ọrụ ọdụ ụgbọ elu London na -ekwupụta na ọdụ ụgbọ elu na -aga n'ihu na -enye iwu mkpuchi ihu mana ọ na -ekwu Britain na -efunahụ ego njem na azụmaahịa ya na ndị mmekọ akụ na ụba dị ka EU na US n'ihi na ndị ozi na -anọgide na -amachibido njem maka ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi nke ọma na mpụga UK. Ụzọ azụmaahịa dị n'etiti EU na US agbakeela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke ọkwa ọrịa na-efe efe tupu UK na-agbadata 92%.
Ọchịchọ ndị njem na -abawanye site na mgbada akụkọ ihe mere eme, mana mgbochi njem ka bụ ihe mgbochi - Ihe na -erughị nde mmadụ anọ gafere Heathrow n'ime ọnwa isii mbụ nke 4, ọkwa ga -ewererịrị naanị ụbọchị iri na asatọ iji rute na 2021. Mgbanwe ndị ọhụrụ emere na usoro ọkụ okporo ụzọ Gọọmentị na -agba ume, mana ihe nnwale nnwale dị oke mkpa na mgbochi njem bụ na -egbochi mgbake akụ na ụba UK wee hụ Heathrow ka ọ na -anabata ndị njem ole na ole na 18 karịa na 2019.
UK na -ada n'ihu ka ndị asọmpi Europe na -ejide uru akụ na ụba -Oke ibu na Heathrow, ọdụ ụgbọ mmiri kacha ibu na Britain, ka na-agbadata 18% na ọkwa ọrịa tupu ọrịa oria amalite, ebe Frankfurt na Schiphol rịrị elu na 9%.
Nkwado ego kwesịrị ịdị ma ọ bụrụhaala na mgbochi ka dị na njem - Njem njem ugbu a bụ naanị ngalaba ka na -eche ihe mgbochi ihu, ma ọ bụrụhaala na ọ na -eme ya, ndị ozi kwesịrị inye nkwado ego gụnyere mgbakwunye na atụmatụ ọgbaghara na enyemaka ọnụego azụmahịa. Heathrow na-akwụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde £ 120 kwa afọ na ọnụego, n'agbanyeghị ịbụ mfu; gọọmentị na -agbanwe iwu iji gbochie anyị iweghachite ụgwọ karịrị akarị ma anyị na -agbagha nke a na Courtlọikpe Kasị Elu.
Gọọmentị UK na -egosi idu ndú zuru ụwa ọnụ na mbupu mbupu ya atụmatụ - Anyị na -anabata atụmatụ ụgbọ elu ikuku nke gọọmentị UK, nke na -egosi na uto nke ụgbọ elu kwekọrọ na iru ikuku efu site na 2050. Anyị na -anabatakwa iwu akwadoro maka iji nwayọọ nwayọọ na -abawanye mmanụ Sustainable Aviation Fuel (SAF); yana usoro nkwụsi ike ọnụahịa SAF, nke a nwere ike ịkwalite mmụba dị ukwuu na mmepụta SAF, na -ekepụta ọrụ n'ofe UK.
Ndị ọrụ ụgbọ elu Heathrow na -ebute ụzọ n'ịbelata ụgbọ elu - Ndị ụgbọ elu Heathrow agbaala mbọ iji ọkwa SAF dị elu site na 2030 karịa na kọmitii na -ahụ maka mgbanwe kacha mma. Anyị nwetara mbupu ụgbọ mmiri mbụ anyị nke SAF n'oge na -adịbeghị anya, ihe akaebe dị mkpa nke echiche maka ịgwakọta SAF na mmanụ ọkụ n'ọdụ ụgbọ elu ụwa zuru ụwa ọnụ.
Onye isi ụlọ ọrụ Heathrow John Holland-Kaye kwuru, sị:
“UK na -apụta site na mmetụta ọjọọ nke ọrịa na -efe efe mana ọ na -ada n'azụ ndị na -emegide EU na azụmaahịa mba ụwa site n'ịkwụsị iwepu ihe mgbochi. Dochie ule PCR na nnwale mpụta mpụta na imeghe ndị njem ọgwụ mgbochi EU na US na ngwụsị July ga -amalite nweta mgbake akụ na ụba Britain n'ala. ”